Mbuya vanobhabhuriswa chitunha, vachikinditswa Mbuya vanobhabhuriswa chitunha, vachikinditswa
“Ndinochiberekeswa nevanhu nezvidhoma zvinotaura neni izvo ndisingaone asi ndichitonzwa kuti makumbo emunhu akarembera nemawoko acho achitova pamafudzi angu,” happy wheels yakadaro chembere ichiri kugwinya iyi.
Mbuya ava vanoti vakabika chikafu vanogona kuona mumapoto nemundiro musisina kudya, ringava sadza kana nyama. Panzvimbo yechikafu, vanoona mava netsvina yemunhu inenge ichipfumbuka hutsi. Vatori venhau apo vaiva pamusha uyu, Mbuya Mupeki vakaenda kubhedhuru kwavo uko vakadzoka vachiti mudhishi ravo raiva nefetereza vakawana mazara tsvina yemunhu, nguva iyoyo. Vatori venhau vakapindwa nekutya kukuru mushure mekunzwa izvi, izvo zvakaita kuti vatadze kutora mufananidzo wedhishi rainzi rainge rati kabu netsvina iri.